Rayson | Onyinye mmiri
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Ọchịchọ nke mmiri ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ọhụrụ anyị na-achọ ịma mma Bali na ndị ọzọ, ga-akpọtụrụ ndị ọrụ ọkachamara maka ọrụ ya. A ga-enyocha ya nke ọma, ọkachasị maka ihe ijuanya, na-ama jijiji na-apụta, na-ama jijiji na-acha uhie uhie, ekpughere ya na ya, na-achọghị.